မီးရထားလမ်းကြောင်း | Ray News | Ray တင်ဒါ ရထားလမ်းတူရကီ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေရထားလမ်းသတင်းများ | ray သတင်းများ | ray လေလံ | ရထားလမ်းတူရကီ
01 / 12 / 2012 အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း
ပထမဦးဆုံး 31.12.2012 1 အတွက်စိတ်ထဲကနေမီးရထားသတင်း site ကို Ray သတင်းများက၎င်း၏အသက်အရွယ်ကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ 11 ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်နှင့်လက်ရှိသတင်းထက်ပိုငျသညျမပြတ်မတောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရဂုဏ်ယူကြုံနေရနေကြသည်နှင့်အတူ, သတင်း, သတင်း archive ကိုရထားလမ်း 10.000 နှစ်ပေါင်းထက် သာ. 10 3000-လတာကာလ။
နီးပါး 1 နှစ်ပေါင်းတူရကီရထားလမ်းစျေးကွက်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ် 70% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာတူရကီအခြားရထားလမ်းစနစ်များကိုကိုယ်စားတခုတခုအပေါ်မှာတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိရန်နောက်တစ်နေ့ပစ်မှတ်။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်အင်္ဂလိပ်ထုတ်လွှင့် raillynews နှင့်ပူးပေါင်း RayHaber Yakidna သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အနေနှင့်သင်နှင့်အတူရှိမည်။
မီးရထားမဂ္ဂဇင်းဖြစ်လာဆီသို့ဦးတည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကခြေလှမ်းများနှင့်အတူတိုးတက်အဖြစ် Ozen Media Group သို့မကြာမီကျနော်တို့2လအတွင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးမည်တစ်ဦးရထားသတင်းမဂ္ဂဇင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ platform ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသင်သည်ရထားလမ်းသတင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိုကျလြှောကျနိုငျ, သင်က၎င်း၏ရလာဒ်များအတွက်လေလံနှင့်တင်ဒါစောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီဇင်ဘာလ 1 2011 ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ထုတ်လွှင့်စတင် RAYHABERအခုဆိုရင်သန့်စင်အကြောင်းအရာနှင့်ကဏ္ဍများနေ့တိုင်း၏နံပါတ်!
သူသည်ကောင်းသောသတင်းအညီလုပ်ပါလိမ့်မည်ပေးသောအချိန်အတွက် 2023 29 န်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်၏နိဒါန်းများအတွက်အစီအစဉ်များဖော်ပြနှစ်တိုင်အောင်မြို့ထဲသို့အစာရှောင်ရထား, 10 ရထားလမ်းပုဒ်၏တထောင်ကီလိုမီတာ။ သငျသညျ 45 ဒေါ်လာဘီလျံစီစဉ်ထားဒီအဓိကကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုရှာဖွေနေကြသည်အရာအားလုံးကို RAYHABERသင်တွေ့လိမ့်မည်။
2 ပြည်ပမှာပြည်တွင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဒီလယ်ပြင်၌ operating ထက်ပိုနေတဲ့တထောင်ကုမ္ပဏီများသည်ငါတို့၏ website မှရည်ညွှန်းပါလိမ့်မည်။ သင်သည်လည်းပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်သင့်ကုမ္ပဏီမြှင့်တင်ရန်လိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ:
ဖက်စ်: + 90 224 4410818
Bursaray အချက်ပြတင်ဒါ | BursaRay အရှေ့လိုင်း ၃ ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း…
Bursa T1 ရထားကားဝယ်ယူတင်ဒါ | BURSA T1 TRAMVAY လိုင်းအတွက်အပိုင်း ၆ ပိုင်း…
| မီးရထားပစ္စည်းကိရိယာက X-Ray X-ray ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်ဖွ ရထားက X-Ray စစ်ဆေးခြင်းစနစ်
နှစ်သစ်ကူးပစ်မှတ် Kardemir အတွက် (အထူးအစီရင်ခံစာ) ကိုမီးရထားပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း Center က Be